Inkinga yeLinuxfera ekhuluma iSpanishi | Kusuka kuLinux
Inkinga yeLinuxphere ekhuluma iSpanishi
phumlani | | Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Ngeke ngisho noma yini engakaze ishiwo Pablo, ngenxa USefsinalas, ngenxa Gabriel, ngenxa mthombeni, noma yi inkinobho ehlutshiwe. I-linuxphere ekhuluma iSpanishi isenkingeni.
Okokuqala kwakuyi-blog Sebenzisa i-Linux eyaqala ukucabanga ngokuphela kwamabhulogi ahlukahlukene anjengePlanet Ubuntu, Ubuntips y Indawo yeLinux, ngaphezu kokuhamba kukaPicajoso I-linux kakhulu. Amabhulogi e-Linux ngeSpanish yizinkomba zokuqala maqondana nokucela usizo, kepha abantu abasemuva nabo banezinkinga zabo. Ukungabi nesikhathi, ukungabi nentshisekelo, ukungabikho kwesondlo, njll. kuraisama uthi uma ngolunye usuku abahleli be-ALSW beshiya le phrojekthi, kuzoba sengathi behluleka umphakathi wonke ngesikhathi lapho i-GNU / Linux kanye nesoftware yomthombo ovulekile futhi evulekile ithola ukubaluleka nokuhlonishwa nangaphezulu kulo nyaka , kepha ukukhuluma iqiniso asikaze sibe khona isikhathi esihle sokuthatha umhlalaphansi uma kungukushoda kwezindaba (le nto ayimile nse). Ngakho-ke kunezinye izizathu eziholela ekufeni kwebhulogi. Ibhulogi yeGabuntu ibachaza kangcono:
1) Isikhathi: Uma udala ibhulogi, kungenxa yokuthi unesikhathi esidingekayo noma uthathe isikhathi seminye imisebenzi ukuze unikele kulesi sici. Inkinga ivela lapho kufika izibopho empilweni ezikuphoqa ukuthi uthathe isikhathi osisebenzisile kubhulogi ukwenza izinto ezibaluleke kakhulu njengomndeni, umsebenzi, njll.
2) Ukunciphisa amandla: Eminyakeni embalwa eyedlule okuwukuphela kwendlela yokubonga umbhali nge-athikili kwakungokuphawula. TO Kusuka ku-linux lokho kwenzeka nakuye (yize ukuvakashelwa Kuyasiza).
3) Amanethiwekhi omphakathi: Manje abafundi bakhetha ukufunda imininingwane ngamanethiwekhi okuxhumana nabantu okunciphisa ukuhamba kokuvakashelwa kwamabhulogi ngakho-ke uma uncike ezikhangisweni ukuze ugcine ibhulogi, isikhathi sifika lapho kufanele uvale khona.
4) Okuqukethwe: Ngeke ngikhulume lutho lapha ngoba angivumelani NOKWENZEKILE ngalokhu akushoyo. Ukhulume ngokushoda kokuvela, kokukopisha kwamanye amabhulogi, kepha okubaluleke kakhulu. Ngiyacaphuna: "Ngiyazi ukuthi kunenqwaba yabasebenzisi beLinux abangasazi isiNgisi futhi abakwazisayo umuntu ohumusha okuqukethwe kube iSpanishi, kepha ngalesi sikhathi sesivele sinabahumushi abazenzakalelayo abanjengoGoogle Translate okwenza lokhu kungabi namsebenzi."
UKUHUMUSHA NGE-GOOGLE ???????????? YEKA UKUBHEKA !!!!!!!
5) UDibilly ungeza esinye isizathu: izimpikiswano ze-Secure Boot ne-Ubuntu. Nini URichard Stallman y Linus Torvalds khipha izilimi zabo, ama-blogger azizwa encishisiwe ngemibono.
UPablo uphetha ngokuziphatha okuthile:
1) Hlukanisa futhi ulahlekelwe: Namuhla kulula kakhulu ukwakha ibhulogi njengoba kunzima ukuyigcina. Uma ucabanga ukuvula ibhulogi ngeSpanishi ngeLinux nesoftware yamahhala, cabanga ngokungathi sína ngokuthi uzokwazi ukuyigcina.
2) Konke okukodwa kungcono kunoyedwa wabo bonke: I-blog isethubeni lokunyamalala lapho ithambekele kakhulu kuphrojekthi yendoda eyodwa. Amabhulogi anababhali abaningi abajwayelekile, ababhali abajwayelekile, abaphathi-co, njll. Asinda isikhathi eside. Njengoba iLinux iyisibonelo, yize wenze i- ukuhlanza muva nje
3) Isikhathi siyimali futhi kanjalo nokusingathwa: Akunasidingo sokuchaza.
Futhi ngikushiya nalo mbuzo: Yini ezozuzisa kakhulu? Humushela izindatshana ku-Spanish (i-Google Translate ayivumelekile), noma ukuthi abafundi bafunda isiNgisi? Lokho ngikushiya ukuze ucabangele.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Inkinga yeLinuxphere ekhuluma iSpanishi
Amazwana ayi-53, shiya okwakho
Sawubona, ngicabanga ukuthi njengoba iLinux iwubufakazi bokuthi ibhulogi ingathuthuka ngosizo lwabo bonke
Kufanele ufunde isiNgisi, lokhu kwisayensi yamakhompiyutha njengoba empilweni yansuku zonke kuwusizo olukhulu, futhi ngenhlanhla kungasiza kakhulu ukungabukelani phansi ngokusebenzisa le distro, kufanele nihlangane nijabule ngokunqoba ngakunye kweLinux
Kukhona emhlabeni wekhompyutha isiNgisi siyisidingo.
Ngiyavuma futhi ekusetshenzisweni kwama-distros kanti i-DesdeLinux ingumphakathi obekezelelayo ngalowo mqondo, ngombono wami 🙂
Kuhle kahle, umbuzo ongekho esihlokweni.
Kungani ungazange weqe uye kuFedora 18? ukuvela okuthile ngakho?
Njengoba ngifunda ku-inthanethi u-Alan Cox akakuthandi kakhulu lokhu kukhishwa okusha, mhlawumbe ngenxa yesifaki sayo esisha, njll.
Uthini ngakho ..?
PS: Uxolo lo mbuzo ngaphandle kwesihloko esiphakanyisiwe.
Ngabe unekhono lokufunda ukuphatha uhlelo oluyinkimbinkimbi njenge-GNU + Linux kodwa hhayi ukufunda isiNgisi? Lokho kubizwa ngobuvila bengqondo. Zibulale
Ngiyavumelana nawe ngolimi, kepha kusalungile ukuthi ube nezinguqulo ngoba kwesinye isikhathi ukufunda ngolimi okungelona olakho kuyisicefe kakhulu (ubuvila, ngiyazi). Kumele futhi sicabange ngalabo abangenalo ithuba lokufunda isiNgisi. Cabanga nje, kunabathile abangakwazi nokukhuluma kahle iSpanishi, bazokhuluma ini isiNgisi? (Ngihleka kakhulu). Ukukhuluma ngokungathi sína ngokwengeziwe, ngithole ama-tutorials amaningi nemininingwane ngeSpanishi kwesinye isikhathi engekho ngesiNgisi noma efingqiwe kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, ngicabanga ukuthi kufanele futhi balandele amabhulogi ngeSpanishi. Umphakathi waseLinux okhuluma iSpanishi ukhulu KAKHULU.
Ngivumelana kakhulu nalokho hhayi ukubeka umuntu phansi ngokusebenzisa i-X noma Y distro. Kuyadinga ukuthi ngifunde ama-athikili ayi-25,000 noma imibono evela kubantu abangenalutho olungcono abangalwenza kunokulwa ukuthi ikuphi ukusatshalaliswa okungcono lapho iningi licishe lifane. Noma kunjalo, PLOS HUAN ngamazwana akho (kulabo abasebenzisa i-Google Translate).
Futhi, iLinux iwumsebenzi wawo wonke umuntu, hhayi nje eminye. Kufanele ufunde, wabelane futhi ubonge, leyo ifilosofi.
Ngivumelana nakho konke netammuz
uma sonke sijoyina ndawonye futhi singakhi ibhulogi ezovalwa kumaviki ama-2. Ake sonke senze umzamo wokufunda isiNgisi njengoba sifunda ngeLinux
Ngiyavuma ukuthi into ebaluleke kakhulu ukubambisana nomphakathi. Ngibhalele izindatshana ezimbalwa ze-desdelinux uqobo. Ngicabanga ukuthi uma ungakwazi ukusebenzisana ngemali eshibhile $$$, kunezinye izindlela zokunonga ibhulogi.
Ngendlela, angivumelani nokuthi uMuylinux uyafa (njengoba kushiwo kwenye yama-athikili ashiwo). UMuylinux uyibhulogi engeyona eyomphakathi, ngakho-ke kuya ngezici ezihluke kakhulu kwamanye ama-blog, kufanele ufunde isimo sawo ngenye indlela.
Umphakathi waseLinux okhuluma iSpanishi u-athomu kakhulu ngombono wami, kufanele sijoyine imizamo kumaphrojekthi angaphansi ngobuningi futhi abe nekhwalithi ephezulu (qonda amabhulogi amancane kepha aphelele ngokwengeziwe). Kusuka ku-linux, njengoba i-kondur05 isho, kuyisibonelo sokuthi ungahlanganisa kanjani iphrojekthi ephelele futhi enikelayo emphakathini we-Linux.
Uma uhlala unolwazi, susa ukungabaza kwami ​​ngokubuza labo abazi okuningi futhi banikele kulokho umuntu angakwazi kwabanye, ngakho konke okufanele ufunde ukufunda nokubhala ngesiNgisi, kuzobe sekuyisikhathi sokuphonsa i-pc kudoti Ngizinikele ekufuyeni izingulube.
Angizivaleli ngokuzihlakulela ngokwengeziwe noma yini enjengaleyo, ngivele ngenqabe ukuthi ngikhulume olunye ulimi lapho sinesichazamazwi noma sicebe ukudlula noma yini enye emhlabeni.
Ngiyaxolisa uma ngilimaza imizwa, kepha lokhu kuyi-GNU Linux, inkululeko, inhlonipho nokufuna ukuzithuthukisa, yebo, ngaphandle "kwezilimi" ezingezona ezakho.
I-PS: ukwenza, ukubhala noma yini, ibhulogi, futhi angikhulumi, ngoba angizange ngidale noma yini, ngimane ngifunde futhi ngicabange.
Impela sinesichazamazwi esicebe kakhulu kune-Americanized English. Uma siya eNgilandi kungenye indaba, kepha into elula ukuyithola eyaseMelika enolimi olungcolile, egcwele izifinyezo (i-vagrancy) nezinye engingafuni ukuqhubeka ngizisho ngoba zizonginikeza isifo sohudo lobuchopho.
Cha, izinto cishe azihlali phakade. Ithi ingoma. Iqiniso ukuthi kunezinto eziningi okufanele zishiye izinto. Nami ngokwami ​​ngikulwile lokho. Kepha esikhundleni sokuzisinda ngokuthumela okuqukethwe okufanele izindaba nokungenzi lutho, ngikhathazekile ngokuthumela okuqukethwe okuqeqesheke kakhulu nokufundisayo. Kudinga isikhathi esincane, yize kudinga umzamo omkhulu ngoba kufanele wenze imikhuba ukuze ubone ukuthi bayasebenza ngaphambi kokushicilela.
Izikhathi zinezici zazo. Bayaphasa, nalabo abanikeza izici zabo bayadlula nabo. Bashiya ifa labo, elingenakuphikwa. Benza umsebenzi wabo.
Mina ngokwami ​​ngikholelwa ukuthi into ebaluleke kakhulu ukuvula ibhulogi ukuthi umuntu uthanda ngempela ukuxhumana, kungaba yimibono, imibono, amathiphu, izindaba, njll ... ngaphandle kwaleyo nto kunzima kakhulu ukugcina ibhulogi isikhathi eside ngoba uzohlala ubona izithiyo futhi ungalokothi inqubekela phambili.
Angiyiboni ngempela "inkinga" kwi-blogsphere yaseSpain maqondana ne-linux, kunalokho ngibona ukuthi kunabathandi abaningi abaqala amaphrojekthi afana nalawa futhi mhlawumbe ngenxa yalokho, lawa mabhulogi athandwayo azizwa sengathi asemsileni futhi afune izaba lapho kungekho khona .
Ngicabanga ukuthi inhloso yalawa mabhulogi ukuxhumana, noma ngabe kuzobalethela izinzuzo zezomnotho noma cha ngoba inhloso akuyona leyo, noma okungenani umqondo webhulogi awukona lokho. Sizohlala singena ezinkingeni zesikhathi futhi kwesinye isikhathi kushicilelwa i-athikili eyodwa noma izinsuku zingadlula ngaphandle kokuvuselelwa, kepha uma unikeza okuqukethwe okuhle, ukuvakashelwa ngeke kuphele, kepha kunalokho, kuzobe kusalindwe ukushicilelwa.
Mayelana nokuhumusha, noma ngabe uyakuthanda noma awukuthandi okungenakugwenywa, imithombo enikeza izindaba noma izimemezelo zivame ukuba ngesiNgisi, umbuzo ngukuthi umuntu ungeza noma agcwalise okuqukethwe kwakhe hhayi ukumane azinikele ekukopisheni lokho i-google ekuhumushelayo ukuhumusha, kunemininingwane.
Uma kumayelana nokugcina ibhulogi, khona-ke ngempumelelo udinga imali engenayo ukukhokhela indawo yokuhlala, isizinda, njll., Kepha lokhu akusona isithiyo uma uthanda ukuxhumana ngempela ngoba lokho kuba yinselelo. Okokugcina, cishe wonke amabhulogi aqaliswa ngendlela yomuntu oyedwa, abahlanganyeli bayangezwa njengoba imibono ikhula, labo abanikeza imibono esezingeni eliphakeme futhi ebukhali bahlolwa nesiphakamiso senziwa kubo, awukwazi ukuthola ilungelo ekuqaleni vula umncintiswano womphakathi bese ufaka abantu kanjalo, empeleni angikaze ngivumelane nemodeli amanye amabhulogi ayisebenzisayo (futhi ku-muylinux ngengozi benze indlela efanayo naleyo engiyichazayo) yokwenza imincintiswano yomphakathi.
imikhonzo esuka ku http://libuntu.wordpress.com (I.
Ngivumelana ngezinto eziningana nalesi sihloko, noma kwesinye isikhathi kungakhululeki ukusebenzisana. Cishe konke umuntu angakusho futhi wonke umuntu uyazi noma echichima imininingwane ngakho. Ngicabanga ukuthi kimi ngizinikela kangcono kuqala ukuze ngifunde okuningi ukuze ngifunde kabanzi.
Ukhiphe ithikithi esandleni sami jjajajjaja.
Bengizokwenza ukungena ngokunembile ngombono. Ngifingqa umbono wami kanjena:
Zonke izizathu ezenze abanye bethu bayeka ukusebenzisana zivumelekile. Ngibambisene izikhathi ezimbalwa futhi ngikholwe uma ngikutshela ukuthi ngingena kubhulogi nsuku zonke, kodwa futhi kumele ngabe ubonile nokuthi angiphawuli, ngani? - Ngoba anginaso nje isikhathi.
Isikhathi, imali, ukuzinikela, umndeni, umsebenzi; Zonke izizathu zivumelekile futhi sonke siyitholile inkinga noma okungenani izimbangela zayo, kepha siyini isisombululo? Ngokwethembeka, ama-blogs kwesinye isikhathi abukeka ngokweqile kimi, ungangizwa kabi, ngiqonde ukuthi maningi, amanye acishe angabi nasondlo kanti amanye anokujwayelekile, kungani ungahlanganisi? Kungani ungacabangi ngamabhulogi ama-2 kuphela we-.deb nomunye we -rr, ngokwesibonelo? Ngiqonde ukuthi, sonke singasebenzisana futhi sinikeze imibono yethu ngakho-ke ngicabanga ukuthi kuzoba khona izindlela eziningi ezingcono zokusebenza. Ake sicabange umzuzwana, kulula ukuyinakekela, kulula ukuyinakekela, nangabafundi abaningi.
Ngikusho ngoba lokhu kwenzeka kimi, ngifuna ukusebenzisana kepha anginaso isikhathi sokwenza njalo, kepha kubhulogi yomphakathi eyengeziwe (njengale, isibonelo) uma ngithumela isikhathi esingu-1 ngeviki, ubungeke ubone igebe ngoba kuzoba nabanye abenza okufanayo. uqobo futhi akusekho ukungena kepha sekungu-5 noma u-6.
Ngicabanga ukuthi indlela ukuhlanganiswa noma okungenani ukuhlanganiswa kokuqukethwe. Okunye futhi, kunabantu abakhononda ngokuthi amaTweaks cishe awakaze asetshenziswe, ukuthi kufanele sivume ukuthi, isikhathi ngasinye lapho i-GNU / LINUX izinzile futhi isoftware yayo inganiki zinkinga, cishe konke kusebenza kahle, bekungafani neminyaka eyi-8 edlule noma ngaphansi lapho ukufaka into eyodwa bekucishe kwephule uhlelo.
Uxolo isikhathi eside.
Angivumelani kakhulu nalokhu okushoyo, angiboni kungenzeka ukuthi okuqukethwe kuqoqwe kumabhulogi ama-2 amakhulu, okungangabazeki ukuthi kuzoholela ezinkingeni ezinkulu, abaningi babahlanganyeli ngeke bahambisane namaphuzu ahlukahlukene njengokuklama, okuqukethwe, umphathi wewebhusayithi ... futhi ngokwemigomo ukuhambela kungaba kubi kakhulu, kusuka kuma-troll ajwayelekile, ukudlula kulowo ogxeka umhleli noma umhlanganyeli kuze kube ukufinyelela amacala omuntu ngamafuphi ... kungcono kakhulu ukuthi kunokwehluka kwamabhulogi, amanye azinikele ekubekeni izingqinamba zentuthuko, ezinye izindaba, amanye amathiphu ngakho ...
Ngama-tweaks, yize i-GNU / Linux izinze kakhulu, kunabasebenzisi okungenzeka ukuthi bafaka i-X application kalula kunalokho okwenziwe ngumhleli noma umhleli othile, kuzoba nezinto abanye abacabanga ukuthi azikufanele ukushicilelwa kepha kuzoba khona ezinye yebo ... noma kunjalo, kuyinto enhle ngokuba nokwehlukahlukana futhi, empeleni, kufana nokucela ama-distros ukuthi abe munye ... wonke umuntu unombono wakhe, okubalulekile ukuthi bawuthanda ngempela nokuthi uma behlangabezana nesithiyo, akuyona imbangela / isisusa sokushiya iphrojekthi futhi maqondana namabhulogi, lowo ukuthanda kakhulu ukuxhumana.
imikhonzo esuka ku http://libuntu.wordpress.com
Into eyodwa ebalulekile engicabanga ukuthi siyayikhohlwa… kwi-distro ngayinye kune-Wikis futhi ngikholelwa ukuthi ekusabalalisweni okuningi kungumthombo wolwazi ongcono kunayo yonke. Uma kumayelana nokusebenzisana ngokungathi sína, khona-ke iyiphi indlela engcono yokukwenza kunokuhumusha okuthile kusuka ku-wiki noma yini. Ngakho-ke ngikholelwa ukuthi ulwazi "olubucayi" lwe-distro alusoze lwantuleka inqobo nje uma kukhona i-wiki.
Ngakolunye uhlangothi, uma okufunayo ukubeka okwangempela embhalweni nakwenye inkulumo ehlekisayo futhi ngaphandle kokuhleleka okungaka ngoba ibhulogi iyindlela yethu engcono kakhulu, kumnandi kakhulu futhi kusondele kulokho umsebenzisi akufunayo, ngombono wami. Umsebenzisi ufuna ukubuza, aphawule futhi azizwe eyingxenye yomphakathi, ngakho-ke izinto kumele zenziwe emphakathini.
Ngingasho (njengoba ngishilo kwenye indawo) njengesiphakamiso, ukuthi thina esinabhulogi kufanele senze isimemo kubafundi bangaphandle, ngesikhangiso esibukeka sikhulu noma okuthile, ukuze bakwazi ukushicilela izindatshana zabo kubhulogi yethu, noma ngabe bayithumela nge-imeyili noma babela umsebenzisi, njll. Ngakho-ke sizogwema amabhulogi wempilo emfushane.
Ngokuqondene nokuhumusha ... sikhuluma ngamabhulogi ngeSpanishi, ngakho-ke ngicabanga ukuthi kuwumqondo omuhle inqobo nje uma ireferensi ifakwa olimini lokuqala kulabo abaziyo. Kubukeka kuwumqondo omuhle kimi ngoba wonke umuntu ubhala ngesitayela sakhe, ngombono wabo nangombono wabo futhi umuntu angahlala efunda emibonweni yabanye, into elahlekile ngomhumushi ozenzakalelayo. Futhi manje kulabo abangafuni ukufunda imibono, khona-ke bafunde isiNgisi.
Lawa mabhulogi abeyisizathu esiyinhloko sokuthi kungani ngaqala ukusebenzisa i-linux ngonyaka odlule, ukucaciswa okuningi kwakuyile bhulogi ne-omgubuntu. Ngiyazi ukuthi ukunikela ngeminikelo kuyindlela enhle yokugcina lawa mabhulogi, kepha inkinga ukuthi ingakanani futhi bangaki abanganikela. Uma kwenzeka ngikwazi ukubanquma ngaphambili, ngingajabula ukunikela u- $ 500 MXN njalo ezinyangeni ezimbili, kepha noma ngabe ngine-akhawunti yasebhange (engingenayo nayo) benginganikela ngama-200 njalo ezinyangeni eziyisithupha, futhi kungenxa yokuthi ngenxa yale bhulogi ngifundile kakhulu, hhayi i-linux kuphela. Manje sengiyazi ukuthi kukhona ukuvinjelwa ezweni lami kwamasayithi aseCuba, ngiyazi ukuthi yini i-linux ethinta umphakathi ngaphandle kwekhompyutha futhi yenza ne-inbox yami ingabi nesizungu kakhulu i-XD
Ukwazi isiNgisi kuhle kuyo yonke into. Ku-intanethi kukhona umhlaba wonke ngesiNgisi.
Kepha ukukubeka ngenkani ukwazi i-linux kubukeka njengephutha kimi.
Ukuze usebenzise i-Linux, funda isiNgisi, funda ukuhlanganisa, sebenzisa i-console ... kahle asibona ama-geek ...
Kuyiqiniso ukuthi ukugcina izindleko zebhulogi, nami ngine-blog futhi manje ngithumela okuncane kakhulu, ngikusebenzisa ikakhulukazi ukumemezela amaphrojekthi wami amasha, izinhlobo ezintsha, njll, ngoba lokho okuncane engikubhalayo ngeLinux engikwenzayo lapha.
UYoyo Fernnandez kusho
Uma uzongibiza ngokuthi "inkinobho engenalutho" okungenani bhala kahle ... inkinobho ine-accent ¬_¬
Futhi maqondana nalolu daba, sengivele ngiqale ngomsebenzi wokubhuloga engiwubize nge- "BloGoCriva" http://deblinux.wordpress.com/2013/03/05/operacion-bloguera-blogocriva-en-marcha-sumate-si-eres-bloguero-linuxero/
Ngikushiya lapho nanoma ngubani ofuna ukujoyina.
Phendula uYoyo Fernnández
ukuhumusha kwe-google kuhumusha njengegalikhi
Ngokufanayo, ngibonile amanye ama-blogs (hhayi la ngokusobala) lapho abasebenzisi belwa khona ukuthi iyiphi ideskithophu engcono noma iyiphi i-distro abayisebenzisayo, ngithola lokho kungenangqondo, ngakho-ke abafuni ukusebenzisa i-Linux.
UFernando Monroy kusho
"Isimo esibucayi seLinuxphere ekhuluma iSpanish" ... ukuthi amanye amaBlogs ayavalwa futhi abanye abantu banquma "ukungabe besashicilela" akuyona inkinga.
Uma kukhona amaBlogs amahle njenge: I-Hispanic Linux, Kusuka ku-Linux, i-DebLinux, Ukubukeka kokuphindayo ... Bakhuluma ngobuphi ubunzima?
Ngibonga ama-Blogger asemuva kwalokhu okukhulunywe ngenhla ngoba AKUKHO BANGABI.
Phendula uFernando Monroy
Izithiyo, ukukhansela, ukubhaliswa nazo zonke izinhlobo zezinkinga zenzeka kuwo wonke amabhulogi kanye / noma izinkundla ezike zaba khona ...
Abaningi bayancipha ngoba benomuzwa wokuthi banikela okuncane noma ukuthi akekho obavakashelayo .. .. nabanye asebevele bechuma .. bacabanga ukuthi akusadingeki bakhulume ngakho, noma sebenesithukuthezi .. noma bayeka ukuba nesikhathi ..
Ngicabanga ukuthi le bhulogi ikakhulukazi..isibonelo esiphelele sendlela okufanele ibhulogi ibe ngayo .. ..futhi ngisekelwa ukuthuthuka okuqhubekayo .. kanye nenani lokuvakashelwa okwandayo ngamanani ..
Mayelana nesiNgisi, akunakuphikwa ukuthi siwulimi lwendawo yonke, singasho ukuthi ulimi lwethu lucebe kakhulu, nakho konke esikufunayo .. ..kodwa umuntu waseRussia, eChina, eFrance, noma kuphi .. ..uma ufuna ukuphawula okuthile kuwo wonke umuntu .. khetha isiNgisi njalo .. .. futhi uma sifuna ukubamba iqhaza kulawo mazwana, siphikisane noma simane siwaqonde futhi sabelane ngawo .. kufanele sifunde ukukwenza ..
Ngiyethemba ukuthi le bhulogi iyaqhubeka nemibono efanayo nokuthi okuthunyelwe okuthakazelisa ngempela kuhlala .. hhayi izindaba nje esivele sizifunda kwenye yamabhulogi aseSpain .. ..ukuthi wonke umuntu ucabangani .. kulungile .. .. futhi lapha uyabona ukuthi bayasilalela (funda) .. ake sisebenzise lesi sikhala esingesiwo wonke umuntu .. futhi sisenze sikhule .. ..naleso simo esibucayi ngeke sisithinte .. 😉
Ngabe othile angaba nomusa kangaka ukuncoma amanye ama-blog amahle ngesiNgisi mayelana nezwe lethu esilithandayo le-GNU / Linux ??? Iqiniso ukuthi kungakuhle kakhulu kimi ukufunda ngesiNgisi ukuze ngithuthukise izinga lami nokuthi iyiphi enye indlela engcono kunokukwenza esihlokweni enginentshisekelo kuso. Ozithobayo.
nah, nazi izingosi ezimbalwa zezindaba
uma ufuna amabhulogi wokufundisa, sikufisela izinhlanhla ezingcono.
Siyabonga ngezixhumanisi, i-diazepan. Ake sibheke ukuthi ngiyasithuthukisa yini isiNgisi sami kancane.
P.S. Uma kwenzeka noma ngubani enentshisekelo, kukhona ama-linux blogs amathathu ngeSpanishi engivame ukuwavakashela. Ozithobayo.
Ngiqinisile angiqondi ukuthi le nkinga idalwa yini.Kuliqiniso ukuthi ezikhathini zamuva nje amabhulogi we-GNU / Linux awasabonwa ngendlela abekade enza ngayo, kepha ngabe kukhona umuntu owake wacabanga ukuthi mhlawumbe imbangela akuyona lokhu okushiwo yiwo wonke umuntu? ?
Ngikunika isibonelo esilula. Ngiqale ibhulogi lami lokuqala ukuba nohlobo lwe-Meme eku-inthanethi, indawo engingathola kuyo noma ikuphi izinto ebengizifunda nsuku zonke, futhi-ke, ngabelana ngazo nawo wonke umuntu ofuna.
Kufika isikhathi lapho kungadingeki ukuthi ngishicilele ngeqiniso elilula lokuthi ngifunda okwengeziwe nsuku zonke, futhi obekubonakala kukusha kimi ekuqaleni akusenjalo. Kepha bonke abasebenzisi abafika abasha futhi baseshe kancane, nakanjani bazokuthola engikubhalile, mina noma enye i-blogger.
Iphuzu ukuthi, mhlawumbe kunamabhulogi ambalwa noma okuqukethwe okuncane ngoba sazi okuningi ... 😛
engxenyeni ethile ngivumelana nawe ... kepha futhi nokwanda kwezingosi zokuxhumana nabantu kugcina ngezingosi, ama-blgos nezinye izakhiwo eziningi ebezisetshenziswa esikhathini esedlule futhi abantu abaningi bayacabanga ngezinto ezifana ne-«blog ukuze uma ngineqembu iyasebenza impela ku-X yokuxhumana nabantu »
Inkinga ngombono wami ayicabangi enkulu, hhayi ukubona isithombe esikhulu.
Ukwazi isiNgisi kubalulekile, kukuvumela ukuthi uhlangane nomphakathi womhlaba, isikhathi sami esiningi ngisisebenzisa ku-inthanethi ku-reddit, github, stackoverflow, ngibambe iqhaza kuhlu lwentuthuko lwamaphrojekthi we-swl, futhi ake ngikutshele ukuthi akusikhona ukuthi bangaki abacabanga, Abakuphathi kabi ngokungabi yisikhulumi sesiNgisi esizelwe, bayakuxolela nangamaphutha athile ohlelo lolimi ama-imeyili akho angaba nawo.
Kepha ulwazi olutholwayo luyinto engenakuqhathaniswa, akufani ukubuza umbuzo ku- "virtualbox in debian" kusuka ku-Linux kunokuthola umlondolozi ofanayo wephakeji akuphendule ohlwini lwama-imeyili.
Ngalokhu angiwubukeli phansi umsebenzi wamabhulogi akhuluma iSpanishi, kepha kunalokho ngiphakamisa ushintsho lwengqondo, ibhulogi ngeSpanishi izokwabelana nomphakathi kepha asikwazi ukukushiyela konke umthwalo, okungukuthi, ukulindela ukuthi ama-blogger ambalwa (maqondana nosayizi umphakathi) ukugcina uhla lwama-distros nezinhlelo. Kufanele sibe nesibindi futhi sihlanganyele nomhlaba wonke, siphume ebhokisini, sicabange okukhulu.
Vumelanani ngakho konke ..
Ngokombono wami, ngamabhulogi (ku-GNU / Linux noma esinye isihloko) kwenzeka into efanayo ngayo yonke eminye imibono, izitayela noma imfashini “emisha”: ekuqaleni kunezelwa amakhulu kodwa ngokuhamba kwesikhathi inqubo iyenzeka Singakubiza ngokuthi "ukukhetha kwemvelo" okusinda abanamandla kuphela noma labo abaguqulwe kangcono ukuguqula.
Kuyiqiniso impela ukuthi ukukhuphuka kwamanethiwekhi okuxhumana nomphakathi kuholele ekuvalweni kwamaphrojekthi amaningi omuntu siqu, okungumbono wami oyisibonelo sokuthambekela kwalezi zikhathi "zokwabelana" ngempilo yansuku zonke ebonakalayo (noma yangempela). Ngokwami, ngikholelwa ukuthi lokhu kuyisihluthulelo sempumelelo yeDesdeLinux, selokhu yasungulwa yethulwe njengephrojekthi yokusebenzisana futhi ebandakanya wonke umuntu, evumele abantu ukuthi bangezwe ngokuhamba kwesikhathi, ngamunye wabo nokuthile ukufaka isandla, kulabo abangakuthola kunzima ukuqala nokugcina iphrojekthi yomuntu siqu, kepha abazozwa lo msebenzi ohlangene njengowabo, okumele sibonge kuwo abadali bawo, i-elav ne-KZKG ^ Gaara, kusukela ekuqaleni babamba lesi sigaba ngamunye ukugxila futhi bazi ukuthi bangakudlulisela kanjani kuwo wonke umuntu.
Mayelana nodaba lolimi, ngingomunye walabo abakholelwa ngokuqinile ukuthi ukwazi isiNgisi kubalulekile (noma ukukhulisa izingulube), kepha angizokwenza umsebenzi wobuvangeli kulolu daba. Manje, mayelana nokuhumusha; Kuyiqiniso ukuthi i-Google Translate iyithuluzi eliwusizo lokuhumusha elithuthuka njalo, KODWA alifani nomhumushi, ukuhumusha kweqiniso kuzoqhubeka nokudinga umuntu osekhibhodi, ngolwazi nangamasiko ukuze akwazi ukudlulisa incwadi nomoya we umbhalo okukhulunywa ngawo, into enzima kakhulu, ngasendleleni, futhi kuthatha isikhathi, njengakho konke okunye.
Ngamafuphi, lelo DesdeLinux lihlala linjalo nanamuhla, indawo okuyireferensi ku-GNU / Linux futhi ikhula ngokwanda njengomphakathi incike kithi sonke, ekunikelweni kwenhlamvu yesihlabathi esikwaziyo ukuyibeka, ngempumelelo enjani lapho sifezile sizozizwa njengokwethu. Ngiyabonga nonke futhi ngiyaxolisa nge-billet ...
Ngiyi-blogger-linuxero (yize kuqhathaniswa, ngoba bengikwenza isikhashana) futhi iqiniso ukuthi konke okuxoxwa ngakho kulesi sihloko kuseduze kakhulu nami. Ukugcina iwebhusayithi ngisho nokuyiphakamisa ngezikhathi ezimbi kunzima, ikakhulukazi ngoba isinxephezelo kuphela esingatholwa kulolu hlobo lwephrojekthi umnikelo othile ovela ngezikhathi ezithile noma ukubonga kwabantu.
Kuyiqiniso futhi ukuthi iningi lethu elishicilelayo likwenza lokho njengengxenye yenqubo lapho amabhulogi angaqedi ukulahla umqondo wawo wokuthi "i-logbook", futhi lokho esabelana ngakho ngokuvamile (ikakhulukazi) kuyizindaba kodwa ikakhulu okuhlangenwe nakho noma ulwazi esilutholayo. Kuyisinyathelo esinengqondo ukuthi ngokuhamba kwesikhathi, ababhali bathola ulwazi oluningi futhi bafunde izinto ezincane nezincane noma balahle nelukuluku ababenalo ekuqaleni, eligcina libashiye bengenakho okusha abangakusho.
Bengihlala ngicabanga ukuthi okuthile okubalulekile, ngaphezu kokunikela ngezinto ezibonakalayo noma imali, ukukwenza nemibono, ngomqondo wokunikeza ababhali isizathu esithile sokubhala, ukuthola izinto ezintsha abazophenya ngazo, bafuna ukushicilela ngazo futhi baqhubeke nokuba nentshisekelo abakwenzayo, ukuze ibhulogi yabo ingabi yisibopho. Futhi mhlawumbe leyo ngenye yezindlela ezinhle kakhulu zokunikela, okungenani ngokombono wami.
Cha, i-Google Translate isebenza kahle impela, kuyakhazimula ukuthi injini ingahumusha ngezinga lekhwalithi eliyenzayo nasemibhalweni yezindiza isuka kolunye ulimi iye kolunye, ingasaphathwa eyokuthi inguqulo yesiNgisi neSpanishi muhle impela.
Inkinga ngezindatshana eziqukethe umbhalo ohunyushwe ngale ndlela ukuthi I-LAZY AND LAZY eshicilela ama-athikili anjalo ayithathi imizuzu emi-2 ukuzihlela futhi izenze zilunge ngokwegrama, ngakho-ke kuyethusa ukufunda izindatshana ezihunyushwe ngokuzenzakalela. I-Google Translate ayisiyona inkinga kepha eyokugcina eshiye kuphela kulokho okukhafulelwe ngumshini.
Ngakolunye uhlangothi, yize ukuntuleka kolwazi kuhle ngoba kusiza ukuthola imininingwane umuntu ayifunayo enetheni, kunjalo, izindatshana ezamukelekile yilezo ezibandakanya okokusebenza koqobo.
Izindatshana ezimbi yilezo lapho abantu abaqhamuka phezulu noma abantu abanesidingo esibi samakhono okuhlaziya (nama-neuron abolayo) abhala "izingcezu zemibono" bengazi ukuthi bakhuluma ngani isihogo, ngoba nje bekwazi futhi ngoba bacabanga ukuthi kuyilungelo labo ukuveza imibono yabo. ukungaziphathi kahle okwenzeka kubo
Lezo zihloko zingcolile kakhulu futhi zifaka isandla ekungcolisweni kwenetha.
Okungakuhle ukuthi kube ukudala iplanethi ye-Hispanic Linux lapho ukufakwa kwamabhulogi ahlukene ngeSpanishi mayelana ne-GNU / Linux kuzoshicilelwa khona.
iplanethi ye-linux ikhona. inkinga ukuthi le bhulogi akuyona eyaseCuba kuphela kodwa eyamazwe omhlaba.
Kukhona i- "Planet Linux" kodwa ihlukaniswe ngezwe uma ngikhumbula kahle. Okubalulekile ukuthi eyodwa ivela nge-100% ngeSpanishi ngamabhulogi "wamazwe"
Ngikubheke ngaphezulu futhi kunendawo enkulu yokwenza ngcono. Okungenayo kufanele kuhlukaniswe ngesigaba hhayi ngezwe. Ngaphezu kwalokho, amabhulogi amaningi alahlekile (ukube ayenokusekelwa okubukwa kakhulu kungaba enye into).
Kungaba futhi yindaba yokuxhumana nabadali futhi ubone lokho abanakho emqondweni, ngoba kungahle kungabi nzima kakhulu kubo ukufaka inketho yokubuka umhlaba wonke nesihlungi esisebenzisa imikhakha noma amathegi. Kepha yebo, i-Linux izindaba aggregator ingaba yinhle kakhulu, ngesitayela se-barrapunto, kepha ngokuqukethwe okuningi nokusebenzisa okuphakelayo.
Angiyena umqambi wanoma yini, futhi angiyena usosayensi wekhompyutha, futhi angizange ngifunde noma yini ehlobene nokuqukethwe kwewebhu, manje okushiywe ngokufunda amabhulogi ngesiNgisi, okungenakugwemeka, njengoba kunoma yikuphi ukukhetha okufanele uvuselelwe, okwangivumela isikhathi sayo sokufaka Ubuntu, i-Debian, i-OpenSuse Slackware, futhi manje uFedora, njengoba sengishilo vele akunakugwenywa uma ungafuni ukusala emuva, ngalo mqondo, ngaphandle kokuncintisana, umuntu angabamba iqhaza kanjani ngaphandle kokufunda izindatshana ngolunye ulimi, umhumushi we-google Kuyasebenza ngoba uhumusha usuka esiNgisini ngokomongo. Jabulela
Umbono wami njengomsebenzisi (oqalayo, hhayi umduduzi) we-Gnu / linux (Debian) OS
Mayelana ne-linuxphere nginentshisekelo kukho konke okungifundisa ukuthi ngithola kanjani okungcono kakhulu ekusebenziseni ikhompyutha, futhi isikhathi sesidlulile sokuhlola i-distro eyodwa nenye nokupholisha isikhombimsebenzisi sami sokuqhafaza. Thumela kwesinye isihloko noma lokho akukhuthazi ukusetshenziswa kwesoftware yamahhala engingayifundi. Ngisohlangothini lwesoftware yamahhala, yefilosofi ye-GNU futhi ngifuna ukuhlangana nabantu lapha eCali, eColombia, abafuna ukusekela i-fsf.org, imikhankaso yayo. Ngibonga kakhulu umsebenzi walabo abangisizile ngokuthunyelwe kwabo ukuze ngiqhubekele phambili kulo mhlaba wokusebenzisa i-Gnu / Linux njengohlelo lokusebenza lwekhompyutha yami. Ngifuna amabhulogi ukuze thina esisekela isoftware yamahhala sikwazi ukuxhumana futhi sandise amandla ethu okusizakala ngokuzisebenzisela ikhompyutha kanye nomphakathi. Mayelana nendaba yeminikelo, kungakuhle uma kukhona abantu abazimisele ngokuxhasa labo abafuna ukusiza futhi abangakatholi ukuthi bangenza kanjani.
Ngiyakuqonda abakushoyo, thina sonke ngasohlangothini lwethu sifunde ukuthi kwesinye isikhathi kungcono ukufunda izindatshana zesiNgisi, ngoba sizifunda esikoleni noma ezifundweni, kepha asibona abaningi. Ngithi kungavumeleka ukuhumusha ezinye izingxenye, okungenani lezo eziyisisekelo, njengalezo zabaqalayo ukuthola abalandeli abaningi. Abasebenzisi abafuna ukungena ngokujulile, angingabazi ukuthi ulimi luyisithiyo.
Lokhu uqobo ngesinye sezizathu ezinkulu zokuthi kungani ngingazange ngiphikisane nokuxoshwa kwami ​​eqenjini lezokuxhumana iLubuntu. Bafuna ukuqhubeka nokwakha nokuvuselela imibhalo ngesiNgisi. Futhi ungachithi isikhathi kwezinye izilimi.
Ukuze ngisabele ngokusemthethweni hhayi nje ukuphawula kokunye ukuphawula, kufanele ngisho ukuthi angikhethi ukubhuloga ngesiNgisi. Kungani ngikhetha ngeSpanishi?
ISpanish ulimi lwesibili olukhulunywa kakhulu emhlabeni.
2. Anginantshisekelo yokuxhuma olimini okungelona olwami olusemthethweni.
3. Uma isiNgisi kungesilo ulimi lwakho olusemthethweni kuyadina ukufunda.
4. Mina, anginalo ulwazi oluningi ngeLinux ngesiNgisi njengoba ngiluthole kumabhulogi aseSpain. Ama-tutorials achazwe kangcono kakhulu futhi kunolwazi oluthe xaxa nge-Spanish ngeLinux kunalokho esicabanga.
5. Ulimi lwami lungcono.
Kuyindida ukuthi konke engikusebenzisayo (ifoni, i-PC, njll.) Kusethelwe esiNgisini ngoba ngiyalahleka ngezinhlelo ezisethwe ngesiSpanish.
Uma bengitshela ukuthi kunemininingwane eminingi esiNgisini (izincwadi zokufunda nalolo hlobo lolwazi olufundile kakhulu kunanoma yini) ngiyakwamukela, kepha njengoba sikhuluma ngamabhulogi, ngeshwa kufanele ngithi kunamabhulogi amaningi alingana noma angcono kunamabhulogi akhona Ukukhuluma isiNgisi kepha iSpanishi. Ungapheli amandla, fuck!
Okuwukuphela kwamabhulogi esiNgisi engiwavakashelayo ngoba mahle futhi abeka imininingwane emihle kakhulu yile:
2. Iwebhu UPD8 (www.webupd8.org)
Usosayensi wamakhompiyutha kufanele azi isiNgisi esanele ukuze akwazi ukufunda imibhalo yekhompyutha yezobuchwepheshe, akukho okunye, ngoba akasoze aqonda ama-nuances olimi okungelona olwakhe njengomdabu. Kepha yebo, kufanele ufunde isiNgisi, kepha umsebenzisi? Umama unguthisha wezomlando futhi usebenzisa iLinux ngoba ngimfakele yona ngasusa yonke imikhondo yohlelo emafasiteleni anemibala kukhompyutha yakhe. Uphatha kahle ukusebenzisa iFirefox yakhe, i-KDE yakhe futhi abuyekeze futhi afake uhlelo ngezikhathi ezithile, konke ku-perf ... (ehhh, bengizosho iSpanishi ephelele, kepha kungaba ngamanga, ukuthi kukhona ukuhumusha kwesinye isikhathi okubonwayo ku onterfaces, xD), konke ngeSpanishi esiqondakalayo. Ngisiphi isidingo onaso sokufunda isiNgisi?
Ngokuphambene nalokho, isikhathi esincane samahhala asinikwa amakilasi akhe, izivivinyo zakhe, umsebenzi wakhe nomndeni wakhe, nabazukulu ababili abangayeki, kufanele kube kuye, angaqali ukufunda okuthile okungakaze kumthande. Ukuze abasebenzisi bafunde isiNgisi kungasebenzi, wonke umuntu uzofunda akufunayo.
Kubaluleke kakhulu ukuthi kunolwazi ngeLinux ngeSpanishi noma iningi lamaSpanishi emhlabeni lizophinda futhi libone iLinux njenge-OS yama "geeks" futhi lizokhosela nakakhulu kwiWindows. Akukho kulokho, kufanele ujwayele ukwenza i-Linux, kufanele ukwenze kucace ukuthi noma ngubani angayisebenzisa, ukuthi noma ngubani angaphendukela ku-Intanethi ukuze afunde okwengeziwe noma abuze imibuzo, njengoba nje ungakwenza ngeWindows. Ake siqede i-linuxphere nabasebenzisi abaningi abasha be-Linux abaqala nge-Ubuntu yabo bazophenduka babuyele emhlabeni weWindows nge "windosphere" egcwele amabhulogi ngeSpanish sabo abathandayo.
Enye into udaba lobuchwepheshe be-blogger. Kuyiqiniso ukuthi lapho okuthile kuyeka ukuba yinto yokuzilibazisa umuntu anikela kuyo ihora ngesonto ukuqala ukunikela ngamahora amaningi ngosuku, akuseyona into yokuzilibazisa kepha sekuwumsebenzi ongakhokhelwa (noma omncane); Yingakho ngicabanga ukuthi kungakuhle ukuguqula ibhulogi ebhala mahhala ibe yintatheli yamakhompyutha yangempela, njengoba kunezintatheli zesayensi, ezomnotho, ezepolitiki, ezemidlalo, njll. Mhlawumbe bambalwa abantu ababhalayo, kepha banobuchwepheshe obuthe xaxa futhi ngubani ongenza umsebenzi wakho. Umbuzo wezigidi zamadola uthi kanjani? Hehe, ungayithola kanjani ibhulogi yeLinux ukukhiqiza imali? Ngaphandle kokungabaza ikhwalithi, ukucaciseleka nokujula kwemibhalo, ikhwalithi yokubhala, ngephrozi enhle, ekhombisa ukuthi lolu limi luyingcweti nokuthi uyakwazi okudingayo (ukuthi ngeshwa kunamabhulogi amaningi kakhulu abonakala ebhalwe ngu i-retard) nesipelingi esihle, zinika udumo futhi zigcina izivakashi zibuya, kepha ngezinombolo ezanele zokuthola imali engenayo engakhokha inkokhelo efanele kubantu abayisekelayo? Umbuzo omuhle.
Yebo-ke, besekuvele kunombono wokukhokhela izindatshana, lapho zisithinta khona okuqukethwe koqobo, kubonakala kukuhle kimi, ngakho-ke besizosusa ikhophi-unamathisele, lapho-ke kuzofana namaScientific Journals, kubukeka njengomqondo omuhle. Jabulela
Okwalabo abangalwi nolimi lwesiNgisi, isixhumanisi esineqoqo elihle lamabhulogi amahle kakhulu, engiwafunda nsuku zonke. Jabulela
Sawubona. Umbono wami othobekile yilokhu:
Vumelana no-4 ngesimo sakho se: translate / google sucks futhi kuyaphoxa ukuthi umuntu aqhamuke nalelo khambi.
Nginezela ukuthi isiNgisi kuzoba isinkwa nebhotela kwikhompyutha kanye ne-blah blah blah blah ... abaningi abaphawula njenge-guru ... kahle angivumelani.
Labo kini abacabanga kanjena balahlekelwe inyakatho ecacile ukuthi amabhulogi ase-Hispanic Linux anayo: Umsebenzi we-PEDAGOGICAL. Futhi ngicabanga ukuthi abaningi bethu lapha bakuphendule kahle. Uzosebenzisa isiNgisi njengolimi lwekhompyutha, kepha lolo limi walufundiswa ngeSpanishi, unganginaki manje.
Umsebenzi wokuhumusha intuthuko enkulu kuwo WONKE UMUNTU, umhumushi ngeke abe ngumakhi wolwazi, kepha wenza umsebenzi omkhulu wokuqonda imininingwane ngolunye ulimi aze akwazi ukuludlulisa ngolimi lwethu. Njengoba umngane wami esho: «… Angidingi ukusungula isondo noma ngifunde ukubasa umlilo njalo ekuseni, abanye sebesungulile vele».
Ngakho-ke kimi "Siyakwamukela kuwo wonke amabhulogi ahumusha imininingwane, ngiyabonga kakhulu."
Phawula kumbhali: Iphuzu 5 angiqondi ukuthi lisho ukuthini, ngokungathi sína, akusikho ukugxekwa noma lutho ukuthi angazi ukuthi usho ukuthini.
Ngenkathi uStallman ethi Ubuntu yi-Spyware, ama-linux blogs amaningi (ikakhulukazi lawo akhethekile ku-Ubuntu) akuthathe njengokushaya kanzima okunikezwa ngubaba wesoftware yamahhala kulabo ababheka ukuthi yi-distro lapho kungena khona iLinux (ngaphezu kwalokho ukuze kungabi esetshenziswa kakhulu kuphela kodwa futhi kube ngeyokuqala abathengisi behadiwe nabasoftware abaliqaphelayo)
Sawubona, angazi okuningi ngeLinux kepha ngiyasazi isiNgisi, kwesinye isikhathi ngibamba iqhaza ekubhaleni ukuhumusha kwama-movie nochungechunge, ngabe othile angangitshela ukuthi yimiphi imibhalo yezobuchwepheshe edinga ukuhunyushwa kuLinux ??? Ngingathanda ukusebenzisana ngangokunokwenzeka, ngiyabonga.
I-Twitter ithola isikhombimsebenzisi esisha seWindows Phone
Ungashintsha kanjani ulimi lohlelo lube yiSpanish eManjaro